धर्म ज्ञान – Dainik Samchar
हामीले सेयर बजारबाटै उल्लेख्य आम्दानी गरेको धेरै उदाहरण पाउन सक्छौं । यद्यपि, सेयर बजारबाट ठूलो रकम आर्जन गर्नु त्यति सजिलो भने छैन । यसको लागि उल्लेख्य धैर्यता र अनुशासन भएर मात्र पनि हुँदैन । बजारको उल्लेख्य अनुसन्धान र त्यसलाई बुझ्नु पनि जरुरी हुन्छ । त्यसमाथि बेलाबेलामा सेयर बजारमा देखिने अत्यधिक उतारचढावले लगानीकर्ताहरुलाई द्विविधामा पारिदिन्छ । कतिबेला बेच्ने, कतिबेला प्रतिक्षा गर्ने र कतिबेला बेच्ने भन्ने भेउ उनीहरुले पाउन सक्दैनन् । अहिलेसम्म सेयर बजारमा लगानीको लागि ढुक्क हुन सकिने कुनै पनि नियम बनेको छैन । तर, राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने सम्भावना बढाउने केही नियम यहाँ उल्लेख गरिएको छ । १. अर्काको धेरै अनुशरण सेयर खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने भन्ने निर्णय मानिसले आफ्ना, साथीभाइ, आफन्त वा अन्य विश्वासिलो मानिसको प्रभावमा परेर गर्छन् । त्यसैले एउटै सर्कलका धेरै मानिसले कुनै
काठमाडौँ- शनिवारको दिन शनिदेवको विशेष दिन हो । शनिदेवलाई न्यायका देवता मानिन्छ । शनिबार शनिदेबको दिन भएकाले आज शनिदेवका विरोधी काम गर्न रामे मानिदैन् । आज शनिदेबलाई प्रसन्न गर्ने काम गनूपर्छ । जस्त ैशनिलाई प्रसन्न गर्नका लागि यस दिन सर्सिउको तेल, कालो तिल आदी चढाइन्छ ।ज्योतिषीय मान्यता अनुसार जसकोे कुण्डलीमा शनिदोष हुन्छ उनीहरुले शनिदेवको पूजा गर्न जरुरी छ । शनिवारको दिन कालो रंगको लुगा या जुत्ता किन्न राम्रो मानिदैन् त्यस्तै आज आपँको अचार खानु राम्रो मानिदेन्किनकी काँचो आँप अमिलो हुन्छ र शनि देव यस्तो चिजको विरोधी हुन् । शनिवारका दिन रातो खुर्सानी नखानुहोस् । त्यसको सट्टा कालो या हरियो खुर्सानिको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । शनिवारको दिन दुध या दही सेवन गर्दा त्यसमा वेसार वा सख्खर राखेर पिउनु पर्छ ।त्यस्त शनिबार रक्सी पिउनु पनि हुँदैन् ।काठबाट बनेका सामान पनि शनिवार किन्न अशुभ मान
ठमाडौँ। भनिन्छ, धन भनेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र खुल्छन् । मनग्य धन आर्जन गरेर सुखी जीवन विताउने मन सबैको हुन्छ। त्यसो त कति धन कमाउने भन्ने कुरा कर्मको फल पनि हो । ब्यक्तिले धन कमाउनको लागि के काम गर्छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो । कसले कति कमाउँछ र कमाएको सम्पत्तिलाई कसरी परिचालन गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपी कतिपय अवस्थामा मेहनत गरेर मात्रै पनि पुग्दैन । ग्रह गोचर राशि लग्नले पनि प्रभाब पारेको हुन्छ । यदि तपाईँलाई ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास लाग्छ भने भने हामीले यहाँ ज्यातिष शास्त्र अनुसार तपाईँको धनी बन्ने सम्भावनाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** कुन कुन हुन् ती राशि ? वृष राशिः वृष राशीमा शुक्रको प्रभाव पर्ने भएकाले वृष राशी हुने व्यक्तिमा धन, वैभव, रोमान्स र विलासिताको कारक मान्ने गरिन्छ । यो राशि भएका व्यक्तिलाई धनी बन्ने कयौँ